Harry Quebert मुद्दाको बारेमा सत्य, जोल डिकरको सम्पादकीय सफलता | वर्तमान साहित्य
ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता
जुआन अर्टिज | | विधाहरू, किताबहरु, नोभेला
ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता।
ह्यारीको बारेमा सत्य क्युबर्ट स्विस लेखक जोल डिकरको उपन्यास हो। २०१२ को बेला फ्रेन्चमा रिलीज गरियो -Le Vérité sur l'Affaire ह्यारी क्वाबर्ट- एक शानदार अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादकीय सफलता प्राप्त। सोही वर्ष कामले फ्रान्सेली एकेडेमीबाट उपन्यासको लागि ठूलो पुरस्कार र विद्यार्थीहरूको गोनकोर्ट पुरस्कार पायो।
त्यस पछि, पुस्तक 33 XNUMX भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ र एक मिनी टेलिभिजन श्रृंखलाको रूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ। यो लेखक मार्कस गोल्डम्यान अभिनय गरी रोमान्टिक थ्रिलर हो। जसले ment 33 बर्ष अघि भएको नोला केगर्लानको मृत्युको संदिग्ध आफ्नो गुरू ह्यारी क्यबर्टको निर्दोष प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्दछ।
1 लेखक, जोल डिकरको बारेमा
2 उनका बाँकी कार्यहरू र पुरस्कारहरू
3 The Harry Quebert चक्कर को बारे मा सत्यको सारांश
3.1 खाली पृष्ठ रोग
3.2 मुख्य संदिग्ध
3.3 गोल्डम्यान अनुसन्धानको विकास
3.4 प्रेम सम्बन्ध र crushes
3.7 एक भन्दा बढि सत्य पत्ता लागेको छ
4 अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक आलोचनाको स्वागत। समीक्षा (२)
लेखक, जोल डिकरको बारेमा
जोल डिकर जून १ 16, १ 1985 XNUMX मा जेनेभा, स्विजरल्याण्डमा जन्म भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै उनले लेखन र प्रकृतिको लागि ठूलो भविष्यवाणी देखाए, फेला पार्न आउँदै पशु पत्रिका १० बर्षको उमेरको साथ। २०१० मा उनले युनिवर्सिटी डे जेनेभबाट कानूनमा स्नातकको रूपमा स्नातक गरे।
उनका बाँकी कार्यहरू र पुरस्कारहरू
ले टिग्रे - एल Tigre (२०१२) युवा फ्रान्कोफोन लेखकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार।
लेस डर्नियर्स जूर्स डी नोस पेरेस - हाम्रा बुबाहरूको अन्तिम दिनहरू (२०१० को बखत प्रतिस्पर्धामा बुझाइएको; प्रकाशकद्वारा सुरू गरिएको L'Age d'Homme २०१२ मा)। प्रिक्स डेस इन्टर्भेइन्स जेनेभोइस।
ले लिभरेस बाल्टीमोर बाट - बाल्टीमोर पुस्तक (2017)।
Stéphanie मेलरको असमानता - Stéphanie मेलर बेपत्ता (2018)।
सारांश ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता
खाली पृष्ठ रोग
उपन्यासको सुरूवातमा मार्कस गोल्डम्यानले दोस्रो उपन्यास निर्माण गर्ने आफ्नो प्रयासमा पूर्ण रूपमा रोकेको छ। एक वर्ष भन्दा बढी पहिले एक प्रतिष्ठित प्रकाशन गृहको साथमा नयाँ प्रकाशनको माग गरेको आकर्षक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको उहाँ दबाबमा हुनुहुन्छ। सम्झौताले नायकलाई आफ्नो पहिलो उपन्यासको सफलता पछि धनी र विलासी अस्तित्वको लागि अनुमति दियो।
यस कारणले, उसले आफ्नो सल्लाहकार ह्यारी क्युबर्टलाई सम्पर्क गर्ने निर्णय गर्दछ, जसले उसलाई न्यू सम्राट, न्यू ह्याम्पशायरमा उसको घरमा भेट्न आमन्त्रित गर्छन्। तर तपाइँको रचनात्मकता पुनः जगाउन यो रणनीति असफल हुन्छ। हो, विगतका यात्राहरुमा उनको आमाबुवाको घर न्यु जर्सी र फ्लोरिडाका लागि। मार्कस शहर छोडछ। यद्यपि उनी क्वेबर्ट सम्पत्तीको किनारमा नोला केलरनको अवशेष पत्ता लागेको कुरा थाहा पाए पछि उनी फर्कन्छन्।
नोला केलरन 33 XNUMX बर्षदेखि बेपत्ता थिए। नोरीको दफन गरिएको शरीरसँगै ह्यारीको एक पाण्डुलिपि फेला पर्‍यो। परिणामस्वरूप, क्विबर्टलाई तुरून्तै राज्य पुलिसको पेरी गालहूवूडले गिरफ्तार गरे। ह्याबेर डेबोराह कूपरको (अस्पष्ट) हत्याको प्रमुख संदिग्ध पनि बन्छ, जुन केलरगानको बेपत्ता भएको रातमा भएको थियो।
सोमरसेटमा फर्किए पछि, मार्कसलाई तुरुन्तै थाहा हुन्छ कि हैरीले लुप्त हुनु भन्दा पहिले नोलासँग उनको गोप्य सम्बन्ध रहेको थियो। त्यतिखेर, उनी १ 15 वर्षकी थिइन र उनी was 34 वर्षका थिए। त्यस्तै मार्कसले पत्ता लगाए कि क्वाबर्टको दोस्रो उपन्यास, दुष्टको उत्पत्ति, Kellergan संग उनको रोमान्स मा आधारित थियो। प्रमाणले छिटो हेरीको बिरूद्ध सार्वजनिक धारणा बदलिदियो।
गोल्डम्यान अनुसन्धानको विकास
बेन्जामिन रोथ - हैरीको वकिल - गोल्डम्यानलाई मद्दतको लागि सोध्छन्। उही समयमा, मार्कसका सम्पादकहरूले उनलाई मुद्दाको बारेमा भेला भएका सबै जानकारीका बारे लेख्न अनुरोध गर्छन्। चाँडै नै, ह्यारी र नोला बीचको सम्बन्धको प्रकृति प्रकट हुन्छ: ऊ उनलाई वास्तवमै माया गर्थ्यो, ऊ उसलाई मार्न सक्दिन। मार्कस गहलोउड, ट्राभिस डान (राज्य पुलिस प्रमुख) र उनकी श्रीमती जेनीसँग अनुसन्धानको प्रस्तावमा काम गर्दछन्।
तीमध्ये पूर्व स्थानीय पुलिस प्रमुख प्रट्टको हत्या (जसले नोलालाई उनीमाथि मुखमैथुन गर्न बाध्य पारेका थिए)। पछि, मार्कसले बुझे कि ह्यारी १ 1975 .XNUMX मा सोमरसेटमा बसाइँ सरे र उनको दोस्रो उपन्यास लेख्न प्रेरणा खोजे। नोबेलको बिचमा समुद्री तटमा भेट नगरेसम्म क्विबर्ट सूचीमा रहेनन् र त्यसबेला उनीहरू दुवैले प्रेम गरे
प्रेम सम्बन्ध र crushes
रोमान्स एक गोप्य राखिएको थियो। तर ती लुथर कालेबले पत्ता लगाए, अरबपति एलिजा स्टर्नको विकृत चाउर, समलिose्गी "कपाट" ह्यारी बस्ने घरको पूर्व मालिक। अर्कोतर्फ, लुथर पनि नोलालाई माया गर्थे र उसले हेरी र नोलाको माध्यमबाट आफ्नो काल्पनिक मूर्तिको आनन्द उठायो। लुथर र ह्यारी दुवैले स्टेशन अफिस चलाउने पुलिस अफिसर ट्राभिस डॉनलाई रिस उठाए।
डॉनको मालिकको छोरी जेनी क्विनसँग गुप्त रूपमा प्रेम थियो क्लार्कको खाना. फलस्वरूप, जेनी लुथरप्रति दयालु थिइन् र ह्यारीसँग क्रस थियो। 30० अगस्तको रातमा, ह्यारी र नोला एकसाथ क्यानाडा भाग्न सहमत भए। के हुने हो भनेर लुथरले थाहा पाए, नोलालाई भेट गर्ने ठाउँमा साई साइड होटेलमा यात्रा गरे।
लुथरले नोलालाई माया गर्थे किनभने उनी सबैभन्दा खुशी चाहन्थे उनी। ट्राभिसले लुथरले नोलालाई मोटेलतर्फ डो leading्याइरहेको देखे र तिनीहरूलाई पछ्याउन थाले। चौफेर र केटीले ज wood्गलमा लुक्न खोजे तर डान र (त्यतिबेला) चीफ प्रेटले उनलाई पछ्याए। अन्ततः पुलिसले लुथरलाई घेरा हालेर मारे। नोलाले हस्तक्षेप गर्ने व्यर्थ प्रयास गर्यो, यद्यपि उनी नाकमा हिर्काएपछि भाग्ने निर्णय गर्छिन्।
डराएर उनले नजिकको घरमा शरण लिन खोज्यो। ठेगाना डेबोरा कूपरको हो, जसलाई एक साक्षीको रूपमा, प्राटले मारेको थियो। जब नोला भाग्न खोज्यो, ट्राभिसले उनलाई मार्यो। नोलाको लाश हेरीको सम्पत्तीमा हत्यारोंले पुरिदिए। पछि, तिनीहरूले लुथरको लाशलाई उनीहरूको गाडी भित्र राखिदिए र अर्को राज्यमा उहाँलाई पहराबाट फ्याँके।
जेनीले ट्राभिससित विवाह गरे। मार्कस शहर आइपुगेपछि उनले आफ्नो पतिको लागि कुनै सम्झौता लुकाउन खोजिन्। त्यस्तै, जेनीले ट्राभिसको प्रटको हत्यालाई कभर गरे (उनीहरूले यसलाई क्र्याकको कारण भएको दुर्घटना जस्तो देखाउन खोजेका थिए)। थप रूपमा, जेनीको बुबाले घटनास्थलमा प्राटको रिभल्भर चढाएर उनलाई दोषारोपण गर्ने कोशिस गर्नुभयो, उहीले Mrs.० वर्ष अघि श्रीमती कुपरको हत्या गर्‍यो।
एक भन्दा बढि सत्य पत्ता लागेको छ
अन्तमा, हत्या र कभर-अपको बारेमा सम्पूर्ण सत्य खुला बाहिर आउँदछ। ह्यारी प्रति सबै दुश्मनी साथी सोमरसेट नागरिकहरु द्वारा प्राप्त स्नेह हुन्छ। मार्कस अब धनी र अधिक प्रसिद्ध छ। तर त्यहाँ अझै सत्य छ कि प्रकट गर्न को लागी: दुष्टको उत्पत्ति यो ह्यारीले लेखेका थिएनन्, वास्तविक लेखक लुथर थिए। मेरो मतलब, ह्यारी क्वाबर्टको पवित्र पुस्तक वास्तवमा चोरी थियो।
अन्य पदहरू लेखे पनि, यो अझै एक कपटीको काम हो। केहि दिन पछि ह्यारी हराउँछन्, आफ्नै पांडुलिपि पछाडि छोडिन्छ, सोमरसेट गुल, जहाँ उनले नोलासँग उनको काल्पनिक प्रेम वर्णन गर्दछ। अन्तिम समाधान जब मार्कस प्रकाशित हुन्छन् सोमरसेट गुल लुथर कालेब नामको मुनि।
अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक आलोचनाको स्वागत। समीक्षा (२)
"अन्तमा तपाई थकित र साहित्यिक एड्रेनालाईनको अथक बहावबाट अचम्मित हुनुभयो, जुन कथावाचकले तपाईका नसाहरूमा लगातार घुसाउँदछ।" मार्क फुमरोली, ले फिगारो.
"यदि तपाइँ यस उज्ज्वल उपन्यास भित्र तपाइँको औंलाहरु राख्नु, यो तपाइँ समात्छ। तपाईं दौडमा रोक्न सक्षम हुनुहुने छैन जुन तपाईंलाई अन्तिम पृष्ठमा लैजान्छ। तपाईं गहिरो हेरफेर, छक्क, चिडिनुभयो र प्रत्येक घटनामा बहु रेखाहरू, रातो हेरि andहरू र दर्शनीय मोड़हरूले भरिएको कहानीले मोहित हुनुहुनेछ ”। बर्नार्ड पिभोट, ले जर्नल डु दिमेन्चे.
"पछि ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता, समकालीन उपन्यास उस्तै हुनेछैन र कसैले पनि यसलाई याद नगर्न ढोंग गर्न सक्दछ। प्रमाण: सुमा कम लौडे ... कम्तिमा ११० मध्ये १०० सुन्दर उपन्यास "। एन्टोनियो डी ओरिको, कोरिरी डेला सेरा.
"यस पुस्तकलाई सम्मान र भविष्यका लेखकहरूले अध्ययन गर्नेछन्। यो एउटा मोडल थ्रिलर हो ... यो पुस्तक पढ्नुहोस् "। एनरिक डे हरिज, एल पेरिडीको डे कातालुन्या.
“जोल डिकरले एक उपन्यास लेखेका छन् जसले यो देखाउँछन् कि के गर्न सकिन्छ ठीक छ जब एक जवान लेखकले आफ्नो काममा बिल्कुलै सबै चीजहरू दिने साहस गर्छन् ... मात्र उनले फिलिप रोथ वा जोन इरभि like जस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिको महानता हेर्ने हिम्मत पनि गरेका छैनन्। यसले उनीहरूलाई पार गर्यो ... यसमा ग्लोबल बेस्टसेलरका सबै मेकिंगहरू छन्। Peer Teuwsen, Ziet डाई.
“जोल डिकरले आफ्ना पाठकहरूलाई अभिभूत तुल्याए। अद्भुत संवादहरू, रंगीन पात्रहरू, भव्य मोहर र एक साजिश जसले सास फेर्न रोक्दैन ... सबै कुरा पूर्ण रूपमा एक किसिमको कथासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ जसमा बिल्कुल केहि पनि देखा पर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता
तपाइँको धेरै पूर्ण सारांश को लागी धन्यवाद! मैले यो किताब केहि समय पहिले पढें र यो माया गरें, अब म "बाल्टीमोरियन" बाट शुरू गर्न जाँदैछु र कथा को मेरो दिमाग ताजा गर्न चाहान्छु। मैले केहि पूर्ण सारांश को लागी हेरे तर तपाइँको जस्तो राम्रो कोहि छैन।
Fab लाई जवाफ दिनुहोस्
मेगन म्याक्सवेल। सर्वश्रेष्ठ विक्रेता रोमान्स उपन्यास लेखकसँग अन्तर्वार्ता